Arcelor kana Acerinox? Ndeipi sarudzo yakanakisa | Ehupfumi Zvemari
Arcelor kana Acerinox? Ndeipi sarudzo yakanyanya kunaka
Mukati meSpanish equities, maviri emoto anopisa pane ese esimbi chikamu, Arcelor neAcerinox. Kunyanya sezvo makambani ese ari maviri ari pachena kune iyo ratidzira hondo izvo zviripo mazuva ano neichi chisina kugadzirwa zvinhu. Kusvika padanho rekuti ivo vari kuratidza kusagadzikana pamusoro peiyo inomiririrwa nemitengo inoumba indekisi inosarudza yemusika wevashambadziri wenyika, Ibex 35. Chero zvazvingava, idzi sarudzo mbiri dzekufunga mumazuva anotevera. Nekuti vane kukosha kwakanyanya kwekuongorora. Kunyangwe iwo ari mashandiro asina njodzi-isina njodzi nekuda kweakasarudzika maficha ekuchengetedzeka maviri.
Ose maviri Arcelor neAcerinox anoteverwa nenhamba yakanaka yevashambadzi vadiki nepakati vanoedza kuti mitengo yemugove yavo ingashanduka sei mukati megore rino. Kubatanidzwa mune yakasarudzika cyclical chikamu, ivo vanogona kutora mukana weiyo kukura kwepasi rose zvehupfumi. Nekuti mune izvi zviitiko vanopindura zvirinani kupfuura mamwe ma equities. Kunyangwe pane zvinopesana, kutarisirwa kwakawanda kunofanirwa kutorwa munguva dzakawandisa dzehupfumi sezvo maitiro avo ari kunyanyisa. Uine kudonha kwakanyanya kunogona kuumba chinopfuura chinetso chimwe mumutsara wako wemari.
Kune vanoongorora zvemari vanoverengeka vanofunga kuti iyo zvipuka ivo vachiri kuenda kuti urambe uine tariro. Mupfungwa iyi, Arcelor naAcerinox vanogona kutora mafungiro ari nani kubva kumusika. Kune rimwe divi, hazvifanire kukanganikwa kuti mumakore anotevera uye munguva pfupi, makambani maviri anonyanya kuratidzwa neyakaenzana hondo. Ivo vane njodzi dzakawanda kupfuura kumwe kuchengetedzeka uko kusiri kuratidzwa kune uku kushanduka mumisika yemari. Kunyangwe dambudziko hombe riripakati pemakambani maviri kutora chinzvimbo kubva ikozvino zvichienda mberi.
1 Arcelor uye Acerinox: inogadzirisa
2 Nzvimbo dzakasiyana dzenzvimbo
3 General mamiriro emabhegi
4 Inoshamisa inokwidza kumusoro
5 Misiyano yakakura mumitengo
6 Yakangwara vhoriyamu yekutora
Arcelor uye Acerinox: inogadzirisa
Kana kwechimwe chinhu zvikumbiro zvemusika wemasheya zvakazviratidza pachavo mumazuva achangopfuura, imhaka yekuti vakasangana nekudonha kwakakomba mukuenderana kwemitengo yavo. Mune zvimwe zviitiko inogona kutorwa se yakawedzera njodzi kuvhura nzvimbo munzvimbo idzi. Uye kune vamwe, semukana chaiwo wekutenga, asi pamitengo yemakwikwi zvakanyanya kupfuura nakare. Kunyangwe iine mhedzisiro mhedzisiro iyo imwe uye imwe kambani iripo. Asi ivo vanoiswa mucherechedzo neyakafanana mitsara mune yavo yekoteisheni uye wadii kuzvitaura kunyangwe mumutsara webhizinesi ravo, izvo zviri zvakafanana zvakafanana.
Mupfungwa iyi, kana iwe uchida kutora njodzi, inogona kunge iri zano rakanakisa kutora mukana kudonha uku. Kunyangwe Acerinox inogona kunge iri iyo ine yakavhurika mamiriro kuitira kuti iwe ugone kuita ako emusika wemusika mashandiro mumazuva anotevera. Kusvika padanho rekuti rinopa yakanyanya kutsanangurwa tekinoroji mamiriro pane zvinoitika kuna Arcelor. Chero zvazvingaitika uye nekuremekedza iri zano, zvinogona kutaurwa izvozvo yepakati nepakati ese ari maviri akanaka mukana wekudyara. Iwe une zvakawanda zvekuwana mune ese mashandiro uye mubairo unogona kukukurudzira kuti utore njodzi iyi inouya nekutangisa mafambiro aya izvozvi.
Nzvimbo dzakasiyana dzenzvimbo
Kana zvasvika pakuongorora kuti ndeapi emakambani maviri akanyorwa anonyanya kunetseka kusimudzira yako equity mashandiro, pane chimwe chikamu chakakosha cheruzivo. Icho hachisi chimwe kunze kwekutanga kwemabhizinesi ako mitsara. Zvakanaka, mupfungwa iyi Acerinox inomiririra yakanyanya iyo zvido zvenyika mukugadzirwa kwesimbi. Uye kudzamara yave pachena kune mamwe mafambiro muhupfumi hweSpain. Iine hukama hwakananga zvakanyanya pamwe nekushanduka kwemarudzi ese emasheya indices. Mupfungwa iyi, usakahadzika kuti kusiyana kwavo kwakanyanya kuderera.
Kune iro chikamu, iyo simbi kambani Arcelor yakanyanya kuratidza kune mamiriro epasirese sezvo usakanganwe kuti tiri kubata neumwe weakakura emarudzi mazhinji ari muchikamu. Nechirema chakakosha, zvese muEuropean Union uye mune dzimwe nzvimbo dzenzvimbo dzakakosha zvakanyanya senge nyaya ye China. Kubva nemaonero aya, ivo vanopa akasiyana manejimendi mamodheru uye zvinogona kutaurwa kuti zvakare ekudyara mamodheru. Kunyangwe hwaro hwebhizimusi rako chiri icho uye hapana misiyano yeakakosha kukosha. Kunze kwemaitiro ayo mukuumbwa kwemitengo.
General mamiriro emabhegi
Saka kuti iwe ugone kuzviudza iwe neimwe kana imwe kambani yesimbi, hazvizokuvadza kuongorora mamiriro akawandisa aunofamba. Ichakubatsira iwe kusarudza sarudzo nekuwedzera chengetedzo vimbiso uye pamusoro pazvose kuchengetedza mafambiro aunogona kuita mumisika yemari. Zvakanaka, mupfungwa iyi, zvinogona kunge zviri munguva pfupi misika yemasheya ine rova pasi uye iwe unogona kukura mumazuva mashoma anotevera kuramba kwakasimba. Dai aya anga ari mamiriro, vese Arcelor neAcerinox vanogona kunge vari sarudzo dzekutenga. Kunyangwe pamwe wekutanga aive nerwendo rwepamusoro rwekukwira nekuda kweakasarudzika maitiro eiyo kukosha.
Kune rimwe divi, zvichave zvakare zvinonakidza kwazvo kuona zvichaitika kune ese ari maviri maitiro kana iyo zviratidzo kusvika pane imwe nhanho pamusoro. Ichave iyo nguva kana iwe uchifanira kusarudza kuti ungabvisa zvinzvimbo here kana kuyedza kuvandudza purofiti zvakatowanda. Kunyangwe paine chokwadi chekuti kuvhiyiwa uku kunogona kudhura zvakanyanya nekuti iko kuderera mukirasi ino yezvinhu zvekutenderera zvinonyanya kutaurwa. Kusvika pakuti iwe unogona kusiya maeuro mazhinji munzira. Chero zvazvingaitika, iri njodzi yekuti iwe unofanirwa kutora nemakambani maviri aya mune ine simba simbi chikamu.
Inoshamisa inokwidza kumusoro
Zvinoenderana nezvakafanotaurwa nevanoongorora zvemisika yemari vane mukurumbira, pane chinhu chimwe chete icho Arcelor naAcerinox vanobvumirana nazvo. Uye hazvisi izvo zvimwe kunze kwekupa kukosha kwakakosha kwekuongorora. Izvo mune chero mamiriro ezvinhu zvinofamba pamamara izvo zvinoenda kubva pa8% kusvika pa20%. Uye mune chero zvazvingaitika, yakakwira kupfuura iyo yakaratidzwa nedzimwe tsika dzekutanga kukosha muhumende hwenyika nehwekunze. Mupfungwa iyi, ichokwadi kuti une zvakawanda zvekuwana pane kurasikirwa. Asi nguva dzose nehungwaru hukuru mumabasa aunoita kubva panguva dzino chaidzo.
Nekudaro, iyo chokwadi chekuti aya ekudzokorora mikana yakapihwa hazvireve kuti izvo zvichazadziswa munguva pfupi iri kutevera. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe unofanirwa kuitora zvakanyanya se magumo, kwete zvekare. Nechinogona kuratidzwa nechinhu ichi mukutarisana nemitengo. Kubva pamaonero aya, kurudziro ichave iri pachena kutenga uye kuti mune imwe kirasi yemitengo kunyange ine hukasha kutora mukana wechiitiko ichi mumitengo.
Misiyano yakakura mumitengo
Kana kwechimwe chinhu izvi zviviri zvakakosha zvakasiyaniswa kubva kune emunyika uye epasi rose zviyero, imhaka yekuti vanopa mutengo wakanyatso tsanangurwa. Pamusoro peiyi hwaro, iwo mamwe emakosheni anomuka kana kudonha zvakanyanya muchikamu chega chega chekutengesa. Nezvikamu zvinokatyamadza zvakanyanya zviri padyo ne5% Chii chinoenderana ne kutengeserana mabasa uye kuti mashandiro anogona kubatsira mune pfupi pfupi nzvimbo yenguva. Nenzira iyi, kana ichikurumidza kushanda inogona kuve imwe nzira yakajeka yekuita kuti hupfumi hwehupfumi hubatsire. Seimwe zano rekudzivirira zvaunofarira sediki uye wepakati investor.
Chokwadi ichi chinoita kuti aya maitiro maviri abatsire zvikuru kuita kwenguva pfupi. Kunyangwe paine chokwadi chekuti Arcelor neAcerinox kuchengetedzeka kunopa vagovana chikamu mugove. Kunyangwe iri pasi peasinga nyanyisa huwandu, inogara iri pasi pe3%. Zvishoma kuderera pane mamwe ese machengetedzo akaisirwa mune yakasarudzika indekisi yemusika wemusika wenyika, Ibex 35, iine avhareji purofiti yakatenderedza 4%. Kwete pasina izvi chimwe chinhu chaunofanira kufunga nezvacho kupinda munzvimbo dzemakambani esimbi aya.
Yakangwara vhoriyamu yekutora
Kune rimwe divi, haazi makambani ane capitalisation yakawandisa, asi ari pazasi pevhareji yakapihwa nemitengo yeIbex 35. Hazvishamise, haina kumira zvakanyanya pakutsinhana kukuru kwemazita pakati pevatengi nevatengesi. Kunyangwe uine kuzadzikiswa kwakazara kana uchizovhura zvinzvimbo mune chero eaya mazano emusika wemasheya. Ndokunge, hauzove nematambudziko akawandisa ku gadzirisa mitengo yekutenga nekutengesa. Sezvazviri nezvimwe zvezvidiki uye zvepakati-zvemari kuchengetedzeka zvinosanganiswa mumusika weSpanish unopfuurira.
Chero zvazvingaitika, iyi sarudzo iwe yaunofanirwa kuisa maququit kubva ikozvino. Kuziva nguva dzose kuti njodzi dzekushanda dzakanyanya kunonoka kupfuura mune dzimwe sarudzo dzinopihwa nemusika wemasheya wenyika. Iko kuchinjika kwemitengo kunenge kuripo mukati megore rose uye izvo zvinogona kuona zano rauchazoshandisa neako portfolio. Chero zvazvingaitika, iwo chete ndiwo makambani ari muchikamu chesimbi ayo anosanganisirwa muSpanish equity indices. Pasina kuve nechikamu chechikamu ichi chakadai. Ndokunge, iwe une mashoma chete maisarudzo aunosarudza kubva kana iwe uchibheja pane ino nzira yekudyara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Arcelor kana Acerinox? Ndeipi sarudzo yakanyanya kunaka
Ndeapi makadhi chaiwo uye ndeapi?
Facto account: kugadzirisa kunobatsira kwekuchengetedza